28 O wee ruo n’oge ahụ na ndị Filistia malitere ịkpọkọta ndị agha ha ka ha buso Izrel agha.+ Ekish wee sị Devid: “Ị maara nke ọma na ọ bụ m ka ị ga-eso gaa agha, gị na ndị ikom gị.”+ 2 Devid wee sị Ekish: “Ị maara nnọọ ihe ohu gị ga-eme.” Ekish wee sị Devid: “Ọ bụ ya mere m ga-eji họpụta gị ịbụ onye na-eche m nche mgbe niile.”+ 3 Samuel anwụwo, Izrel dum akwaworo ya ákwá arịrị ma lie ya na Rema bụ́ obodo ya.+ Ma Sọl emewo ka a ghara inwekwa ndị na-agba afa na ndị ọrụ ha bụ ịkọ ọdịnihu n’ala ahụ.+ 4 E mesịa, ndị Filistia zukọtara maa ụlọikwuu ha na Shunem.+ Sọl wee kpọkọta Izrel dum, ha wee maa ụlọikwuu ha na Gilboa.+ 5 Mgbe Sọl hụrụ ndị agha ndị Filistia, egwu jidere ya, obi wee malite ịma ya jijiji nke ukwuu.+ 6 Ọ bụ ezie na Sọl na-ajụ Jehova ase,+ Jehova anaghị aza ya ma ọlị,+ ma ọ̀ bụ ná nrọ+ ma ọ̀ bụ site na Yurim+ ma ọ̀ bụ site n’ọnụ ndị amụma.+ 7 N’ikpeazụ, Sọl sịrị ndị na-ejere ya ozi: “Chọọrọnụ m nwaanyị mgbaasị,+ m ga-agakwuru ya jụọ ya ase.” Ndị na-ejere ya ozi wee sị ya: “Lee! E nwere nwaanyị mgbaasị nọ n’En-dọọ.”+ 8 Sọl wee jigharịa ejiji+ wee yiri uwe ọzọ gawa, ya na ndị ikom abụọ so ya; ha wee bịakwute nwaanyị ahụ n’abalị.+ O wee sị: “Biko, jiri mgbaasị gị gbaara m afa,+ kpọpụtara m onye m ga-akpọrọ gị aha ya.” 9 Otú ọ dị, nwaanyị ahụ sịrị ya: “Lee, gị onwe gị maara ihe Sọl mere, otú o si gbuchapụ ndị na-agba afa na ndị ọrụ ha bụ ịkọ ọdịnihu n’ala a.+ Gịnịzi mere i ji na-eme dị ka onye na-esiri mkpụrụ obi m ọnyà ka e wee gbuo m?”+ 10 Ozugbo ahụ, Sọl ji Jehova ṅụọrọ ya iyi, sị: “Dị nnọọ ka Jehova dị ndụ,+ ikpe njehie agaghị ama gị n’ihe a!” 11 Nwaanyị ahụ wee sị: “Ònye ka m ga-akpọpụtara gị?” O wee sị: “Kpọpụtara m Samuel.”+ 12 Mgbe nwaanyị ahụ hụrụ “Samuel,”+ ọ malitere iti mkpu n’oké olu; nwaanyị ahụ wee sị Sọl: “Gịnị mere i ji ghọọ m aghụghọ, ebe ọ bụ gị bụ Sọl?” 13 Ma eze sịrị ya: “Atụla egwu. Ma gịnị ka ị hụrụ?” Nwaanyị ahụ wee sị Sọl: “Ahụrụ m otu chi+ ka o si n’ala na-apụta.” 14 Ozugbo ahụ, ọ sịrị ya: “Olee otú ọ dị?” o wee zaa, sị: “Ọ bụ agadi nwoke na-apụta, o yikwa uwe elu na-enweghị aka.”+ Sọl wee mata na ọ bụ “Samuel,”+ o wee hulata kpọọrọ ya isiala. 15 “Samuel” wee malite ịsị Sọl: “Gịnị mere i ji enye m nsogbu site n’ime ka a kpọpụta m?”+ Sọl wee sị: “Anọ m n’oké ihe isi ike,+ n’ihi na ndị Filistia na-alụso m ọgụ, Chineke ahapụwokwa m,+ ọ dịkwaghị aza m, ma ọ̀ bụ site ná ndị amụma ma ọ̀ bụ site ná nrọ;+ ọ bụ ya mere m ji na-akpọ gị ka m mara ihe m ga-eme.”+ 16 “Samuel” wee sị: “Gịnịzi mere i ji na-ajụ m ase, ebe ọ bụ na Jehova ahapụla gị+ wee ghọọ onye iro gị?+ 17 Jehova ga-emekwara onwe ya dị nnọọ ka o kwuru site n’ọnụ m, Jehova ga-adọkapụkwa alaeze ahụ n’aka gị+ wee nye ya mmadụ ibe gị bụ́ Devid.+ 18 Ebe ọ bụ na i rubeghị isi n’ihe Jehova kwuru,+ i meghịkwa ka iwe ya nke dị ọkụ bịakwasị Amalek,+ ọ bụ ya mere Jehova ga-eji mee gị ihe a taa. 19 Jehova ga-enyefekwa gị na Izrel n’aka ndị Filistia,+ gị+ na ụmụ+ gị ndị ikom ga-anọkwa n’ebe m nọ echi. Jehova ga-enyefekwa ndị agha Izrel n’aka ndị Filistia.”+ 20 Sọl wee buru onwe ya tụọ n’ala ozugbo ahụ, egwu jidekwara ya nke ukwuu n’ihi okwu “Samuel.” Ọ dịghịkwa ike fọdụrụ n’ime ya, n’ihi na o righị nri ụbọchị ahụ dum na abalị ahụ dum. 21 Nwaanyị ahụ wee bịakwute Sọl hụ na obi erughị ya ala ma ọlị. O wee sị ya: “Lee, ohu gị nwaanyị erubewo isi n’ihe i kwuru, m wee tinye mkpụrụ obi m n’ihe ize ndụ,+ rubekwa isi n’okwu ị gwara m. 22 Ugbu a, biko, ṅaa ntị n’ihe ohu gị nwaanyị kwuru; ka m debe ibé achịcha n’ihu gị, rie ya, ka i wee nweta ike, n’ihi na ị ga-ala.” 23 Ma ọ jụrụ ajụ wee sị: “Agaghị m eri ihe.” Otú ọ dị, ndị na-ejere ya ozi nakwa nwaanyị ahụ nọ na-arịọ ya. N’ikpeazụ, ọ ṅara ntị n’olu ha wee si n’ala bilie ma nọdụ ọdụ n’oche. 24 Nwaanyị ahụ nwere nwa ehi+ mara abụba n’ụlọ. O wee gbuo*+ ya ngwa ngwa, werekwa ntụ ọka* gwọọ, were ya mee achịcha na-ekoghị eko. 25 O wee dọwara ya Sọl na ndị na-ejere ya ozi, ha wee rie ya. E mesịa, ha biliri lawa n’abalị ahụ.+
^ Otú e si dee ya n’asụsụ Hibru bụ “chụọ ya n’àjà.”